Ijusi yeKhonkco ye-SEO evela kwiYouTube
Uyifumana njani iJuice yeKhonkco kwiYouTube
NgoLwesihlanu, Matshi 4, 2011 NgoMgqibelo, ngoMeyi 11, 2013 UNick Carter
Ndibe nempumelelo enkulu ndisebenzisa i-YouTube ukukhulisa ukubaluleka kwamaphepha okufika kwigama elithile elingundoqo. Yinkqubo elula kwaye nantsi indlela ehamba ngayo:
Yenza iphepha lokufika elinamagama aphambili kwi-URL, iqhekeza lahlulwe. Oku kunceda i-bots ukujonga amagama ngokwahlukileyo kwaye ke vuma ukubaluleka kwakho kwibinzana ojolise kulo. Kulo mzekelo, ndiza kusebenzisa http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
Yenza ividiyo oza kuyifaka kweli phepha lokufika. Ukusuka kumbono we-SEO, umxholo wevidiyo awunamsebenzi konke kuba sonke siyazi ukuba i-bots ayinakukhasa ividiyo. Kodwa, ngokwembono yomntu, qiniseka ukuba ividiyo iyasebenza. Emva kwayo yonke loo nto, eli liphepha esiya kuthi siqhubele kulo ukugcwala kwabantu.
Ngenisa iVidiyo kwiYouTube kwaye Sebenzisa igama lakho elingundoqo okanye ibinzana njengesihloko sevidiyo. Umzekelo, ividiyo yam ibizwa ngokuba yi "Small Business CRM"
Okokugqibela, faka i-hyperlink (http: // ifakiwe) kwinkcazo yevidiyo.
Xa u-YouTube epapasha le vidiyo, nawuphi na umtya ofunyenweyo ohambelana nephethini ye-URL, ukuqala nge-HTTP, ixhuma ngokuzenzekelayo kwi-URL. Kulapho kubalulekile ukuba i-URL yephepha lokufika ibaluleke kuba awunakho ukwenza ngokwakho okubhaliweyo kwe-anchor, i-Youtube ngokulula ikhonkco ledilesi. Ke, ukuba nexesha lakho eliphambili kwi-URL iqinisekisa ukuba isicatshulwa se-anchor siqulethe igama lakho eliphambili. Umzekelo, jonga i-URL edibeneyo eli phepha levidiyo le-Youtube.
Kodwa ayisiyiyo le ilandelayo ikhonkco? Ewe kunjalo. Ithegi ye-anchor ethi i-YouTube isonge kwi-URL yakho iya kunikwa uphawu lwe-rel = "akukho-mkhondo". Qikelela: ngubani okhathalayo! Ngaphandle kwento ethi umgangatho we-w3 uthi akukho mkhondo wethegi ekufanele ukuba uyithetha, idatha eyimbali ibonakalise kum amaxesha ngamaxesha ukuba ezi ziqhagamshelo ekungafuneki ukuba zilandelwe zinceda ukukhulisa ukubaluleka kwe-URL ekujolise kuyo. Nangona kungasebenzi kangako kunonxibelelwano lweposi, kuyasebenza.
Ngapha koko, ithegi ye-H1 kweli phepha, isihloko, iqulethe igama lakho eliphambili. Ke, unephepha elinxulumene nexesha lakho eliphambili elinxibelelana nephepha lakho lokufika ngakwisicatshulwa se-anchor esifakwe kwikota yakho ephambili. Kulula!
Okokugqibela, kodwa kungaphelelanga apho, ukushumeka le vidiyo kwiphepha lokufika apho ngoku linxibelelene khona linyathelo lokugqibela elibalulekileyo. Le vidiyo ifakiwe ixelela i-Google bot ukuba umxholo wephepha ubaluleke kakhulu kwikota ephambili oyifunayo. Ngoba? Kuba isihloko sevidiyo efakelweyo sinamaxesha aphambili eli phepha lijolise kulo. Ngelixa ezinye izinto ezifakiweyo ezifayilwayo zingakhaswanga, ndinentembelo yokuba ibhotile kaGoogle iyayiqonda into yeYouTube kunye nezinto ezikwisihloko sevidiyo kwialgorithm yayo.
Iingcinga zam kwiGoogle Panda Change Algorithm
Mar 6, 2011 ngo 6:54 PM
Ndingenza isindululo esinye-beka ikhonkco lakho ngaphambi komxholo wakho kunokuba ungene kulo. Uninzi lwabantu alwandisi kwaye lufunde yonke inkcazo ye-YouTube. Uya kufumanisa ukuba uya konyusa izinga lokucofa ngokubeka ikhonkco kuqala.
Agasti 8, 2011 kwi-10: 01 AM
Wowu! Oko kuhle kakhulu! Khange ndiyazi loo nto! Kodwa, ndinombuzo: ukuba ubeka ikhonkco kwindawo yakho emva kokuphawula kwividiyo, ngaba iya kuba yinto embi kwishishini lakho? Ndiyathetha, ngaba iGoogle iza kohlwaya indawo yam? ukuba akunjalo, ngaba kunokwenzeka into embi?
Mar 7, 2011 ngo-2: 24 AM
Ndiqale ukukwenza oku ngaphezulu kwenyanga ephelileyo kwaye bendifumana iziphumo ezilungileyo zokwenyani hayi mna kuphela kodwa abathengi abaninzi ngokunjalo. enkosi ngokukhupha imfihlo yam engxoweni. INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA.
Mar 7, 2011 ngo 7:13 PM
Enye into ekufuneka uyenzile kukukhuphela umxholo wevidiyo yakho. Oku kuyakunika ithuba elingcono lokubonwa ngaphakathi kukhangelo lwe-YouTube. Umhlobo wandinika iintloko phezulu http://speakertext.com Yinkonzo leyo ikwenzela imisebenzi emininzi. Ndiqinisekile ungabhala isicatshulwa esikhutshelweyo kwiphepha lokufika kwaye ulifihle kwimbonakalo yoluntu ngelixa usanceda kwinqanaba lephepha lakho. Ulwazi olukhulu kunye neengcebiso malunga nokwenza umxholo wevidiyo endaweni yokuyibeka nje.
Mar 7, 2011 ngo 7:16 PM
Ulwazi olukhulu. Abantu abaninzi abayiqondi indlela yokubiza iividiyo ngendlela enokubanceda. Jonga kwakhona ekubhaleni kunye nenkonzo enje ngeSithethi esiBhaliweyo. Oku kukuvumela ukuba uthumele umbhalo okhutshelweyo kuYouTube owenza ukuba kube lula ukufumana umxholo wevidiyo yakho kwiYouTube uqobo. Unokuthatha isicatshulwa usibeke kwiphepha lakho lokufika kodwa ulifihle kwimboniselo.
Meyi 7, 2011 kwi-3: 30 PM
Enkosi ngeposi enolwazi kakhulu. Umbuzo wam kuphela ubuya kuba, kutheni uphinda umxholo wevidiyo ubuyele kwiphepha lokufika? Abantu sele beyibonile kuYouTube, kutheni unganalo umxholo owahlukileyo ohambelana namagama aphambili endaweni yoko? Ngaba ayizukusebenza kakuhle ukuba akunjalo?
Meyi 7, 2011 kwi-4: 58 PM
Umbuzo omkhulu. Zimbini iindlela zokubukela ezifikelela kwividiyo-inye
kuthetha ukuba kungakhangelwa kwindawo yokubamba ividiyo njengeYouTube,
okanye ngabantu ababhekisa kwividiyo kwiYouTube. Nangona kunjalo, ukubeka
ividiyo kwindawo yakho iya kulandisa elo phepha kwiinjini zokukhangela kwaye ubonise
kwibha yevidiyo eboniswa ngokuzithandela kwiziphumo zokukhangela. Njengoko
Kulungile, ukuba unenethiwekhi elungileyo nentlalontle- uthumela ividiyo
Umxholo kwiphepha lakho lokufika unokutsala ngakumbi ukugcwala kwabantu. Okokugqibela,
kubonisiwe kuvavanyo oluninzi olunokuthi ividiyo ekwiphepha lokufika inakho
konyusa amazinga okuguqulwa. Ndivumelana nawe ngentlonipho enye-
Qinisekisa ukuba ividiyo ekwiphepha lakho lokufika ifanelekile kumxholo
Pha. Kulungile oko!
Ukuhamba kweSithili seLake
Meyi 22, 2011 kwi-10: 52 AM
Ndimele nditsho ukuba inqaku lakho elingentla lelona libalaseleyo kwaye likhangeleka linobungcali endikhe ndalifunda namhlanje kwaye ndifundile ezimbalwa kwii-You Tube hyperlinks. Ukuhambelana phakathi kwenombolo yokukhangela inombolo yokukhangela kunye nekhasi lewebhu elisandula ukwandiswa lilungile kwaye kunqabile ukuba lithathwe ngamanye amawebhusayithi e "SEO" kwaye ndicinga ukuba oku kufanelekile kwaye sisiphelo esifanelekileyo kwisicwangciso sam sentengiso. Enkosi.
Mar 28, 2012 ngo 4:28 PM
Le yayiyi-bud enkulu yeposti.
Juni 10, 2012 ngo-7: 00 PM
Inqaku elihle lokudibanisa kwi-youtube, oku kwezi ngcebiso ze-seo
Nov 17, 2014 kwi-9: 32 AM
Ingcebiso enomdla kunye nombulelo ngokwabelana. NgeGoogle elawula uninzi lophendlo olwenzeka kwi-intanethi, ukuba nomxholo othile kunye nokunxibelelana kumaqonga awahlukeneyo yindlela eqinisekileyo yokufumana i-webmaster nganye okanye i-blogger. Kwaye kunye nokugcwala okukhulu okuyalelwa ngu-YouTube yonke imihla kwi-intanethi, akukho ndawo ibhetele yokufumana ithuba lokugcwala.
Iposti enkulu, wuthande umxholo. Bendizibuza ukuba uthini umxholo owusebenzisayo, thanda ibar esecaleni ephelayo Nceda undithumelele ikhonkco lakho lokudibana ukuba unayo, ungathanda ukufumana itemplate kunye ne-plugin
Sisebenzisa ifayile ye- Iplagi yeMenyu eSuperfly ephendulayo yeWordPress efumaneka kwiCodecanyon. Umxholo ngumxholo wokuqala owenziwe ngokwezifiso esasebenza ukuphucula.
Juni 22, 2015 ngo-5: 43 AM
Ngelishwa, kufuneka ufumane ividiyo eyenziweyo yokwenza oku kunokuba kubiza kakhulu kunentengiso nje.
Juni 22, 2015 ngo-10: 45 PM
Ndingayilayisha ividiyo yasimahla kwi-iPhone yam! Hayi?
Ivenkile ye-E-Liquid yase-UK
Juni 26, 2015 ngo-9: 50 PM
Ngaba awuzange uve ngeFiverr?
Iposti enkulu, ngendlela, iYouTube sisixhobo esihle sokunxibelelana kunye nokwazisa.
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2015 ngo-5: 58 PM
Inqaku elihle! Ndifuna ngokuqinisekileyo ukuyijonga.